betel – Healthy Life Journal
All posts tagged "betel"
—–၊ သွားနှင့် ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး ပြောကြားသည်။ ၊—– Q. ကွမ်းစားရင် သွားမှာ ဘယ်လိုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ အရင်ဆုံး ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ကွမ်းစားတာကြောင့် အရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုက သွားတွေမှာ ကွမ်းဂျိုးတက်တာပါပဲ။ သွားတွေ အရောင်ပြောင်းလဲပါတယ်။...
ကွမ်းစားခြင်းဖြင့် ကိုဗစ်ရောဂါကို မကာကွယ်နိုင်ရုံတင်မက ပိုမိုကူးစက်နိုင်ဟုဆို
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကွမ်းစားခြင်းဖြင့် ကိုဗစ်ပိုးကို မကာကွယ်နိုင်ရုံတင်မက ကိုဗစ်ရောဂါ ပိုမိုကူးစက်နိုင်ကြောင်း ကိုဗစ်အကြောင်း သိကောင်းစရာ အမေးအဖြေအစီအစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း (ဗဟို) ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးထင်အောင်စောက အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ ကွမ်းယာစားတဲ့အခါ...
ရန်ကုန်က ကွမ်းယာဆိုင်များ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့မှစ၍ ပိတ်ရမည်
———၊ ဟန်တိုးစံ ၊——— ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ ကွမ်းယာဆိုင်တွေကို စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ကစပြီး ပိတ်သိမ်းဖို့ ပြောထားတယ်လို့ တာမွေမြို့ နယ် စည်ပင်ဥက္ကဌ ဦးအောင်မျိုးလင်းက ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချုပ် ၊ ကုသရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်...
ကွမ်းစားသူတို့ သတိပြုရမယ့် ခံတွင်းကင်ဆာအကြိုအဆင့်
—၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကွမ်းစားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ခံတွင်းကင်ဆာ အကြိုအဆင့်လက္ခဏာတွေကို ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ။ (သန်လျင်သဘာဝတရားရိပ်သာမှ မေးမြန်းသူတစ်ဦး) A. ကွမ်းစားရင် ခံတွင်းကင်ဆာနဲ့ လျှာကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ ကွမ်းစားလို့ ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့အခါ လျှာမှာအနာဖြစ်လာတယ်၊ မနာဘူး၊...
——–၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——– “မရဘူး မိန်းမရေ . . အဝေးပြေးကားမောင်းရတော့ ကွမ်းစားမှ အိပ်ချင်စိတ်ပြေတာ၊ အိပ်မငိုက်အောင် ကွမ်းကို မပြတ်စားပေးရတယ်ကွ” အဝေးပြေးကားမောင်းသည့် ဦးဘမောင်က ကွမ်းယာစစားဖြစ်သည့်အကြောင်းနှင့် ကွမ်းယာစွဲနေသည့်အကြောင်းကို ကွမ်းဝါးရင်းပြောနေသည်။ ကွမ်းစားရင်နိုးကြားသလား၊ တကယ်ပဲ မအိပ်ချင်တော့ဘူးလား။...
ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ကွမ်းနှင့် ကင်ဆာ
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) (အတွင်းရေးမှူး၊ ရွှေရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ ဆေးလိပ်ကြောင့် ကင်ဆာအဖြစ်များတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကင်ဆာကာကွယ်ရေးနဲ့ ဆေးလိပ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အကြံပြုချင်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်းသောအချက်ကို...